Umkhuhlane okhuselekileyo kunye neNtsholongwane emzimbeni
Isingeniso kwi-Immune Immune and Immunity
Ukungakhuselekanga ligama elinikezelwa kwisigqeba somzimba sokukhusela ukukhusela kuma-pathogens nokulwa nezifo. Yinkqubo eyinkimbinkimbi, ngoko-ntsholongwane iyahlulwa ibe ngamaqela.
Ukungakhuselekanga kukusetyenzana lomzimba olusetyenziswa ukukhusela nokulwa nokusuleleka. SEBASTIAN KAULITZKI / Getty Images
Enye indlela yokukhusela ingozi yinto engacacile kunye neyodwa.
Ukukhuselwa okungapheliyo - Ezi khuselo zisebenza kuzo zonke izinto zangaphandle kunye nezifo. Imizekelo ibandakanya izithintelo zomzimba, ezinjengezinwele ze-mucous, zangasese, i-eyelashes kunye ne-cilia. Imithintelo yeMikhali yinto efanelekileyo yokukhusela. Izibambiso zeMichiza ziquka i-pH ephantsi yesikhumba kunye nejusi yesisu, i-lysozyme ye-enzyme ngezinyembezi, indawo ye-alkaline ye-vagina kunye ne-earwax.
Ukukhuseleka ngokuthe ngqo - Lo mgca wokhuselo usebenza ngokusongela iinkcukacha ezithile, njengabakteria abathile, ii-virus, iimonons, kunye ne-mold. Ukhuselo oluthile olwenzayo malunga ne-pathogen ngokuqhelekileyo alusebenzelanga nxamnye nolunye. Umzekelo wokhuseleko oluthile lukhuselo lwenkukhu okanye ukugonya.
Enye indlela yokuhlawula iimpendulo zokhuseleko lomzimba kukuba:
Ukungenazifo ezingenasifo - Uhlobo lokuzikhusela komzimba olululweyo okanye olusekelwe kwimimiselo yemvelo. Olu hlobo lokhuseleko lunikela ukhuselo ukususela ekuzalweni de kube sekufeni. Ukukhuselwa kwama-Innate kuqukethe ukhuseleko lwangaphandle (umgca wokuqala wokukhusela) kunye nokukhusela kwangaphakathi (umgca wesibini wokukhusela). Izikhuselo zangaphakathi zibandakanya umkhuhlane, incedisi yenkqubo, umbulali wendalo (NK), ukuvuvukala, i-phagocyte kunye ne-interferon. Ukukhulelwa kwama-Innate kukwaziwa ngokuba ngumzimba wokuzikhusela komzimba okanye ukhuseleko lomzimba.
Ukungafumaneki Ngomzimba - I-immunity's adapted or adaptive immunity is the third line of defense. Oku kukhuseleka kwiintlobo ezithile zezilwanyana. I-immunity immunity ingaba yendalo okanye yendalo. Ukuzikhusela komzimba kunye nokuzibandakanya kunamacandelo angasebenzi kwaye asebenzayo. Iziphumo ezikhuselekileyo zokukhuselana nokusuleleka kwintsholongwane okanye ukugonywa, ngelixa i-immunity isuke ivela kumntu ngokwasemzimbeni okanye ekufumaneni i-antibodies.
Masiqwalasele ngokuthe kratya kwintsholongwane ekhutheleyo neyengqondo kunye nokungafani phakathi kwabo.
I-lymphocytes iyakubona i-antigens kwiiseli zangaphandle. UJUAN GARTNER / Getty Izithombe
Umsebenzi wokukhusela umzimba uvela ekuhlahleni kwintsholongwane. Amanqaku angaphezulu kwi-pathogen surface enza njengama-antigens, eziziindawo ezibophelelayo zamagciwane. Ama-antibodies ayenama-proteli e-Y enemilo, enokuthi ikhona ngokwawo okanye ifakwe kwi-membrane yeeseli ezizodwa. Umzimba awugcini isitolo se-antibodies esandleni sokuthatha isifo ngokukhawuleza. Inkqubo ebizwa ngokuthi ukhetho lwe-clonal kunye nokwandiswa kwakha amanqwelwane aneleyo.
Imizekelo yeNtsholongwane engasebenzi
Umzekelo wendalo yokuzikhusela komzimba ulwa nomkhuhlane. Umzekelo we-immunity immatural actif is building up resistance to the disease ngenxa yokugonywa. Impendulo yokumelana nomzimba yindlela yokuphendula ngokugqithiseleyo kwi-antigen, okubangelwa yintsholongwane yomzimba.
Iimpawu zokhuseleko olukhuselekileyo
Ukukhuselwa komzimba okukhuselekileyo kufuna ukutyhila kwi-pathogen okanye kwi-antigen ye-pathogen.
Ukubonakaliswa kwi-antigen kubangela ukuveliswa kwee-antibodies. Iingqungquthela zibeka uphawu lwesisele ekutshatyalaliswa ngamaseli ekhethekileyo ebizwa ngokuthi i-lymphocytes.
Amaseli achaphazelekayo ekukhuselweni okukhuselekileyo ngamaseli e-T (ii-cell ze-cytotoxic T, ii-cell T zeseli, i-memori ze-T, kunye neeseli ze-plasma), iiseli ze-B (i-cell B kunye neeseli ze-plasma), kunye neeseli ezise-antigen (iiseli ze-B, iiseli ze-dendritic, kunye ne macrophages).
Kukho ukulibaziseka phakathi kokungena kwi-antigen kunye nokufumana umthambo. Ukuqala kokubhenca kukukhokelela ekuthiwa yimpendulo eyintloko. Ukuba umntu uphazamiseka kwi-pathogen kwakhona kamva, impendulo ihamba ngokukhawuleza kwaye inamandla. Oku kuthiwa yimpendulo yesibini.
Umkhuhlane we-Active uhlala ixesha elide. Unokunyamezela iminyaka okanye ubomi bonke.
Kukho imiphumo embalwa yempembelelo ekhuselekileyo. Inokuthi ingabandakanywa kwizifo ezizimeleyo kunye nobuthathaka, kodwa ngokuqhelekileyo ayibangeli iingxaki.
Unina onomhlengikazi utshintshe iintsholongwane kumntwana wakhe ngobisi. Umthombo wesithombe / i-Getty Izithombe
Ukuzikhusela komzimba akufuneki ukuba umzimba wenze ama-antibodies ama-antigen. Ama-antibodies asetyenziswa ngaphandle kwendalo.
Iimzekelo zeNtsholongwane engenaMzimba
Umzekelo wokhuseleko lomzimba ongasemgangathweni ngumkhuseleko wengane ngokusuleleka kwiintsholongwane ngokufumana i-antibodies ngokusebenzisa i-colostrum okanye ubisi lwebele. Umzekelo we-immunity immtional immunity ukufumana umjovo we-antisera, owokumiswa kwee-particle antibody. Omnye umzekelo umjovo we-antivenom yenyoka emva kokuluma.
Iimpawu zeNtsholongwane kaGawulayo
Ukuzikhusela komzimba kusenziwa ngaphandle komzimba, ngoko akufuneki ukufunyanwa kwi-arhente echaphazelayo okanye i-antigen yayo.
Akukho ukulibaziseka kwezenzo zokuzikhusela komzimba. Impendulo yalo kummeli osulelayo ushesha.
Ukuzikhusela komzimba kungekhona njengokuhlala ixesha elingapheliyo. Ngokuqhelekileyo isebenza kuphela kwiintsuku ezimbalwa.
Imeko ebizwa ngokuthi isifo se-serum sinokubangelwa ukuvela kwi-antisera.
Imithetho Yokhuseleko YeBloology
Imisebenzi eyi-Big Biology kunye nezifundo
I-Electron Transport Chain kunye neMveliso yoMbane ichazwe
Yenza isichazi kunye nemizekelo
Indlela Yokubhala IBhayibhile Ngeprojekthi YeZenzululwazi Efanelekileyo
Isikhokelo kwiintlobo ezahlukeneyo ze-Pathogens
Eminye Imifanekiso Yenkolo
Ukuza kweSibini kweSaturn
I-Neo-Impressism kunye nabaTshabi emva koMbutho
I-Clicks ku-10 yeeNdawo eziLungileyo eziLungileyo
Indlela yokwenza i-sodium silicate okanye i-Glass Glass
Yintoni ekuthethwa ngayo ngabathengi?
Yiyiphi imibala ebonakalisa kwiingubo ezivela kuThixo neengelosi